Ady tany Ankorondrano Andrefana : Fianakaviana maro no tandindomin-doza
Trano manodidina ny 200 tafo eo no tadiavin’ny mpanam-bola iray no ravaina, efa hitovy tantana amin’ny ahavaon’ny tranon’ny mponina ny tany anotorana ny toerana.
Mbola tsy tonga ny fahavaratra dia efa dibo-drano sahady ireto mponina eto amin’ny fokontany Ankorondrano Andrefana ireto, amin’izao fotoana izao. Izany dia vokatry ny fanotorana tany ataona olona iray mpanambola manodidina ny tananan’izy ireo. Teratany karana izay milaza ho manana taratasy sady nahazo alalana avy amin’ny kaominina sy ny fanajariana ny tany.
Tsentsina ary tsy misy lalana ivoahana intsony ny rano eny amin’ity tanàna manodidina ity. Ankoatra izay, ahian’ireo mponina ihany koa ny mety mbola hisian’ny fandrodanana trano ataon’ilay milaza ho tompon’ity tany totofana ankehitriny ity. Velon-taraina noho izany ireo mponina rehetra voakasik’izany eto Ankorondrano Andrefana. Tsy manaiky ny tsy rarainy atao amin’izy ireo ny mponina, izay efa nipetraka aman-taonany maro teo amin’io tanàna io.
Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra mahefa izy ireo mba hijery akaiky izao raharaha izao.